Reading Method – Min Thayt
Tag: Reading Method
ဖတ်သူက စာကို ဖတ်တဲ့နေရာမှာ၊ အခြေခံ (၂) မျိုးခွဲခြားကြည့်နိုင်တယ်။ ၁) စာကို ဖတ်တာ၂) ကလောင်ကို ဖတ်တာ ◾ စာကို ဖတ်တာ စာကိုဖတ်တယ်ဆိုတာ၊ စာကိုပဲကြည့်တယ်။ ကလောင်ကို မကြည့်ဘူး။ ကလောင်က ဘယ်လိုကလောင်ပဲဖြစ် ဖြစ်၊ ဘယ်လိုလူကပဲ ရေးရေး။ ကလောင်ကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကလောင်ကို အာရုံမပြုဘူး။ စာကိုသာ အာရုံပြု တယ်။...
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာပဲ စာကြီးပေကြီးတွေ ဖတ်ကြပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်နဲ့ စာဖတ်ခြင်းဆိုတာမှာ ကျနော့်အတွက် လက်တို့ ပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခြေခံ စာဖတ် ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက် (၂) ခု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “တူးပီ” “2P” လို့ခေါ်တဲ့ ဦးတည်ချက်နှစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ စာဖတ်ရင် Pleasure လို့ခေါ်တဲ့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပျော်နေဖို့ လိုသလို၊ Purpose ခေါ်တဲ့ ဖတ်ရင်းနဲ့...
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်း၊ နိုဝင်ဘာလမှာပဲ ကျနော် စာဖတ်ခြင်းဓလေ့နဲ့ လက်ထပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော့် ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို ကျနော် အမှတ်ရနေမိတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် စာဖတ်ခြင်းအလေ့ကို စွဲစွဲမြဲ မြဲဖြစ်လာတော့၊ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ဆရာ” ရှာခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကျနော့် စာဖတ်ခြင်းအလေ့ကို ပိုပြီး ခိုင်မာအားကောင်းအောင် လမ်းညွှန်နိုင်မယ့် “mentor” တစ်ယောက်ယောက်လိုချင်ခဲ့တယ်။ ကံအကြောင်း မသင့်လို့ ကျနော့်မှာ...
ဦးနှောက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ ဖေမြင့် စာအုပ္အညႊန္း ကွန်ဖြူးရှပ်က ပြောဖူးသည်။ မြုပ်နှံခြင်း မရှိတဲ့သူက အကျိုး အမြတ်ကို မခံစားနိုင်ဘူး…. တဲ့။ ဘယ်မှာ မြုပ်နှံရမှာလဲ။ ဘယ်မှာ မြုပ်နှံရမှာလဲ။ မြုပ်နှံတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က ကြားဖူးခဲ့သည်မှာ ရွှေအိုးကို မြေကြီး ထဲမှာ သိမ်းဆည်းမြုပ်နှံသည်ကိုပင် နားလည်ခဲ့သည်။ မြုပ်နှံ ခြင်းဖြင့် ဘာရနိုင်မှာလဲ။...
ဒီလိုပဲ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို နားလည်ဖို့၊ စာတွေ အများကြီး ဖတ်နေပေမယ့် ချက်ချင်း ပွင့်မသွားတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကို အဆိုအမိန့် တွေက လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Audio စာဖတ်သမားဖြစ်ရင်၊ ကြိုက်တတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ တော်တော်များများရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့တော်တော်များများထဲက၊ အဆိုအမိန့်တွေ ကောက်ချက်တွေ၊ မှတ်ချက်တွေကို စုထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော် စာဖတ်သမားဘဝ အစကတည်းက၊...
လက်နဲ့ စာဖတ်တာက၊ ကြေညက်သော စာဖတ်နည်းပါပဲ။ • ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၊ • ကိုယ့် ဦးနှောက်ထဲ၊ • ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ…. ကို တစိမ့်စိမ့် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နည်းနဲ့ စာဖတ်ခြင်းပါပဲ။ Audio ကျနော် စာသမားဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ၊ စာဖတ်နည်း တော်တော်များများကို သုံးကြည့်တယ်။ အကောင်းဆုံး စာဖတ်နည်းရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တဲ့ စာဖတ်နည်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သို့ပေမယ့်၊...
ကိုယ်လေ့လာဖို့ ခက်တဲ့ ဘာသာရပ်ရဲ့ Key Word တွေကို ကျေကျေညက်ညက် နားလည်ပိုင်နိုင်နေ ပါစေ။ ဒါဆိုရင်၊ ဖတ်ဖို့ ခက်တဲ့ စာအုပ်က၊ အလှမ်းမှီလာပြီ။ Audio တချို့စာအုပ်တွေက၊ စာဖတ်သူရဲ့ အားထုတ်မှုကို တောင်းတယ်။ စာဖတ်သူက တစ်စုံတစ်ရာ အားစိုက်မှု မရှိဘဲ၊ အဲ့စာကို ဖတ်လို့မရဘူး။ ဖတ်လို့ ရတယ် ဆိုအုံးတော့၊ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့၊...
စာတွေကို အပျော်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ စာတွေကို၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ စာတွေကို၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာသလို၊ ဖတ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊ အထောက်အကူဖြစ်ဖို့လည်း ဖတ်လို့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ဘဝမှာ၊ အချိန်များများ မရပါဘူး။ အချိန်တွေက၊ တိုတောင်းလွန်းတယ်။ အဲ့တော့၊ ကိုယ့်အချိန် တွေကို ဘာအတွက် အသုံးပြုမလဲဆိုတာ၊ ရွေးရမယ်။ ကိုယ်ဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း ရွေးရမယ်။ ကိုယ်ဖတ် တဲ့...
တချို့စာတွေက၊ မျက်လုံးနဲ့ ဖတ်ရုံနဲ့ မရဘူး။ လက်နဲ့ ဖတ်မှရမယ်။ လက်နဲ့ ဖတ်တယ်ဆိုတာ၊ လိုင်းသား၊ မျဉ်းသား၊ ခရေပွင့်ပြ၊ မှတ်စုထုတ်၊ မှတ်ချက်ရေး… စတာတွေကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ဖတ်တဲ့နေရာမှာ၊ များများ ဖတ်ဖို့ထက်၊ နာနာဖတ်ဖို့ကိုပဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ဒါ… ကျနော့် စာဖတ်သက်တစ်လျှောက်လုံးမှာ၊ ကျနော် ရခဲ့တဲ့ နည်းပဲ။ များများဖတ်ဖို့လည်း မလိုဘူးလား...